Turkey si ọsọ na ot Railway Construction Projects | RayHaber
HomeTurkeyMediterranean Region01 AdanaTurkey si ọsọ na ot Railway Construction Projects
12 / 11 / 2019 01 Adana, 21 Diyarbakir, 24 Erzincan, 27 Gaziantep, 33 Mersin, 42 Konya, 58 Sivas, 63 Sanliurfa, 70 Karaman, 80 Osman, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, Eastern Anatolia Region, Ala nke Anatolia Region, General, Oru ngwa ngwa, Turkey
Arụmọrụ ụzọ ụgbọ oloko ọsọ ọsọ ma nke gboo
Turkey si ọsọ na ot Railway Construction Projects; Na mgbakwunye na ọrụ ụgbọ oloko dị elu, a na-aga n'ihu na-arụ ma na-arụkwa okporo ụzọ ụgbọ ala. A na-arụzi okporo ụzọ ụgbọ elu 1.480 dị elu na ụzọ ụgbọ elu 646 km nke ụgbọ elu.
Kemgbe 2003, Tecer-Kangal (Sivas), Kemalpaşa-Turgutlu na Kayseri Northern Cross na-agafe ụzọ ụgbọ okporo ígwè ọhụrụ; Menemen-Aliağa II. ahịrị, Tekir-Dağ-Muratlı akara abụọ, Cumaovası-Tepeköy, Arifiye-Pamukova na Kütahya-Alayunt II. Başkentray Project, Tube nke Marmaray, Njikọ Nemrut Körfez, Tepeköy-Selçuk 2. E wuchara ahịrị, Kars-Tbilisi na usoro mkpịsị ụkwụ wee rụọ ọrụ.
Oge izizi 1971 ka ụgbọ oloko dị na Van, 39 bụ oge mbụ na 2010 na enyere mpaghara njikọ ụzọ ụgbọ oloko otu mpaghara. Railgbọ okporo ígwè 36 km nke dị n’etiti Tekirdağ na Muratlı ka ejirila ụzọ abụọ.
Bursa-Bilecik, Sivas-Erzincan (Sivas-Zara), Konya-Karaman, Karaman-Nigde (Ulukisla) -Mersin (Yenice), Mersin-Adana, Adana-Osmaniye-Gaziantep okporo ụzọ awara awara, Gaziray, Palu-Genc-Mus. nchụpụ, Akhisar Variant, Aliağa-Çandarlı-Bergama, Gebze-Söğütlüçeşme / Kazlıçeşme-Halkalı (Marmaray), Adapazarı-Karasu n'okporo ụzọ ụgbọ oloko a na-arụ.
Bursa-Bilecik Nnukwu Ọsọ okporo ụzọ
Ewu nke 42 km okporo uzo di n’etiti Bursa na Mudanya bidoro na 1873 wee wuchaa ya na 1891. Na-eje ozi n'etiti 1892-1951, e mechiri ahịrị a wee mebie na 1953.
N'usoro nke akụkọ okporo ụzọ okporo ụzọ anyị; Njikọ Bursa, nke bụ otu n'ime obodo izizi izizi na ụzọ ụgbọ oloko, na netwọ ụgbọ okporo ígwè nke Mịnịstrị anyị na-ahụ maka ya ma ewulite ya na Jenụwarị 2012 A na-ewu ihe owuwu nke 106 km ahịrị ahụ dị ka ahịrị abụọ, eletriki, nke egosipụtara, na oke ọsọ nke 250 km / h.
Site na mmezu nke oru a, ogologo oge ogologo ụgbọ okporo ígwè nke Bursa, nke bụ obodo mepere emepe kemgbe 1953, ga-akwụsị. Ọ ga-ejikọ ya na İstanbul, Eskişehir na Ankara. Oge 2 n'etiti Ankara na Bursa ga-abụ minit 15, Bursa-Eskişehir ga-abụ awa 1 na Bursa-İstanbul ga-abụ 2 awa 15 nkeji.
Uru socioeconomic nke Bursa, nke bu otu n’ime obodo ndi isi obodo anyi n’ile anya onu ogugu ya ma nwekwuo onu ahia, ga abawanye karie site na ijikota na uzo ugbo ala.
Arụ ọrụ na 56 km Bursa-Gölbaşı-Yenişehir, akụrụngwa nke ngalaba 50km Yenişehir-Osmaneli na nkwenkwe ụgha na nhazi ọkụ, akara ngosi na telefon (EST) na-ewu ọrụ nke Bursa-Osmaneli ngalaba (106 km).
Mgbe arụchara ọrụ a, ma ndị njem ma ụgbọ elu ga-agba ọsọ. Ọzọkwa, a ga-arụ ụgbọ okporo ígwè dị elu na ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Bursa na Yenişehir, a ga-arụkwa nnukwu ọdụ ụgbọ oloko n'ọdụ ụgbọ elu.
Ihe eji eme njem ugbo elu Konya Karaman
Na mgbakwunye na arụmọrụ ụgbọ elu dị elu n'etiti Ankara-Konya na Ankara-Eskişehir-Istanbul, ebumnuche bụ ime ka okporo ụzọ dị ugbu a nwee okpukpu abụọ ka ọ bụrụ ọsọ ọsọ nke 200 km / h wee malite ọrụ ụgbọ elu dị ọkụ.
N'ọnọdụ a; Madegbọ okporo ígwè 102 km dị n'etiti Konya na Karaman bụ ọsọ nke 200 km / h, ụzọ abụọ, eletriki na signaled. Ewuzuwo ihe ulo oru nile nke ulo a, nke oru bidoro na 2014, ma nabata oru ndi oku. Ọrụ ndebanye aha na-aga n'ihu. Mgbe arụchara ọrụ a, a ga-ebelata njem njem n'etiti Konya na Karaman site na awa 1 na nkeji 13 rue nkeji 40.
Oru a; Karaman-Ulukışla-Mersin-Adana - Osmaniye - Gaziantep - Sanliurfa-Mardin bụ njikọ izizi nke Rail Corridor nke na-eso ụzọ ahụ.
Karaman Niğde (Ulukışla) Mersin (Yenice) Nnukwu Razọ Ọgba Ọsọ
Site na owuwu nke Ankara-Konya na Eskişehir-Konya YHT na ịrụ nke Konya-Karaman High Speed ​​Railway; Karaman - Niğde - Mersin - Adana - Osmaniye - Gaziantep - Şanlıurfa-Mardin line ghọrọ ọkwa dịịrị ụzọ.
Karaman-Niğde (Ulukışla) -Mersin (Yenice) na-arụ ọrụ ụgbọ elu a na-agba ọsọ 200 ezubere ịbụ nke abụọ, eletriki na nke ọhụụ na ọsọ km / h. Ahịrị ga-ebu ma ebu ndị njem.
A na - eme ihe nrụpụta na ọrụ nkwenkwe ụgha iji mee ka akụkụ Karaman-Ulukışla nke 135 km ọsọ ọsọ.
Emechara uzo uzo uzo ohuru nke di n'etiti 110 km na Ulukışla-Yenice. Ọrụ nro na-aga n'ihu.
Mersin-Adana Project Railway Speed ​​Speed
A na-eme atụmatụ iwu okporo ụzọ okporo ụzọ dị elu n'etiti Mersin na Adana, nke ga-eme ka ikike nke eriri ahụ dịkwuo elu, bufee ibu site na Konya, Karaman, Kayseri na Gaziantep na Mersin Port ngwa ngwa ma bulie njem njem kwa afọ site na oge 3.
67 km n'ogologo 3.and 4.hat a na-ewu.
Adana Osmaniye Gaziantep Nnukwu Speedzọ Railway Speed
Ugbu a, oke ọsọ nke ụgbọ oloko na Adana UM Osmaniye - Gaziantep - Şanlıurfa-Mardin corridor bụ 120 km / h na ụgbọ oloko bu 65 km / h. Mgbe emechara ọrụ ụgbọ elu anyị dị elu nkebi a, ndị njem ga-enwe ike ịgba 160-200 km / h na ụgbọ oloko ibu 100 km / h. N'ihi ya, a ga-eme ka oge njem dị mkpirikpi ma ga-enye ọrụ nwere ntụsara ahụ na nke dị mma.
N'ime ogo nke Adana-Osmaniye-Gaziantep High Speed ​​Railway Line
Works A na-aga n'ihu na-arụ ọrụ iwu ihe owuwu ụzọ abụọ ga-aga 79 dị n'etiti Adana-İncirlik-Toprakkale.
●● Ewula akụkụ nke 58 km nke akụkụ nke 13 km okpukpu abụọ ụzọ abụọ na-arụ ọrụ dị elu n'agbata Toprakkale na Bahçe amalitela. A na-eme atụmatụ ọmịiko maka akụkụ 45km fọdụrụ.
●● Ewu nke Fevzipaşa Variant n’agbata Bahçe-Nurdağı, nke edobere dika ọsọ 160 km / h, emere ya dika igwe eletriki, ihe eji egosi ya na uzo abuo. N'ime oke ọrụ ahụ, ọrụ na-aga n'ihu na igwe 17 TBM maka owuwu okporo ụzọ kachasị ogologo (10,1 km tube) n'okporo ụzọ ụgbọ oloko nke ewuru n'okporo ụzọ 2 ruo taa.
A na-eme atụmatụ iwu ụzọ ụzọ abụọ, elektrik na akara 160 km n'etiti Nurda between na Başpınar na ọsọ 200-56 km / h. Xzọ 121 km dị n’etiti ọrụ ahụ na Nurdağ-Narlı-Başpınar ga-eme ka ihe dị ka 65 km. Ọrụ owuwu na-aga n'ihu.
Infrastructure Ihe akụrụngwa Akçagöze-Başpınar oru ngo a, nke a na-arụ, erutela ma rụchaa ọrụ nkwenkwe ụgha a. A ga-ewu okporo ụzọ 5,2 km na eriri 2 dị ugbu a ga-agbadata ruo 27 km ma dị mkpirisi 11 km. Oge njem nke ụgbọ oloko ga-ebelata site na nkeji 16 rue nkeji 45.
Adana Osmaniye Gaziantep Okporo uzo ugbo elu
Ọrụ akụrụngwa nke Sivas-Zara (74 km) nke Sivas-Erzincan High-Speed ​​Railway Line, nke bụ ihe na-aga n'ihu na mpaghara Ọwụwa-West na nke ga-atụteghachi okporo ụzọ Silk akụkọ ihe mere eme site na ijikọ na Kars-Tbilisi-Baku Railway Project, na-aga n'ihu, Zara-İmranlı Refahiye - Projectkwadebe oru ngo na nkwadebe ọrụ dị nro na-aga n'ihu na Erzincan.
Gaziantep-Sanliurfa-Mardin Nnukwu Razọ Ọgba Ọsọ
Mgbe atulere ya na mpaghara ya, oru ngo nke Mürşitpınar-Şanl Newurfa New Railway, nke ga-ejikọ Şanlıurfa, otu n'ime obodo dị mkpa nke GAP Mpaghara, na ọdụ ụgbọ okporo ígwè bụ isi. N'ihi ọgba aghara dị na ókèala ndịda, atụmatụ ụgbọ ala ọhụrụ a ga-ewu site na north ruo Gaziantep-Şanlıurfa-Mardin.
Otu oru dị oke mkpa na azụmaahịa ndị agbata obi dị na ndịda ala anyị bụ Nusaybin-Habur Rapid Railway Project. Atumatu oru ngo a bụghị naanị na Turkey, bụghị na Syria ma ọ bụ Iraq, ga-okporo ígwè iga ghọọ ndị ọzọ ịrụ ọrụ nke ọma na Middle East na Europe. Site na mmepe na mpaghara a, eriri ahụ kwuru ga-agbakwunye ụtụ nke ụzọ ụgbọ ala na mbupụ na Middle East ma hụ na mmepe nke akụ na ụba mpaghara.
A kwụsịtụrụ ọrụ ụgbọ elu Nusaybin-Habur nke dị ọsọ ọsọ, nke nọ n'okpuru GAP Action Plan n'ihi ọnọdụ mmetụta dị na mpaghara ahụ, a ga-aga n'ihu n'ọrụ nkwadebe ọrụ ahụ mgbe ọnọdụ dabara adaba.
Razọ Ọgbọ Ọhụrụ Ndị Ọzọ
Mwepu nke okporo ụzọ Palu-Genç-Muş; A na - aga n'ihu n'ọrụ maka mbupu nke ụzọ okporo ụzọ dị ugbu a nke 115 km, nke ihe mgbochi mmiri ahụ a ga - ewu na Osimiri Murat, na - aga n'ihu, ọ ga - agwụ agwụ na njedebe nke 2019.
Akhisar Variant: A na-eme atụmatụ iwepụ okporo ụzọ ụgbọ mmiri na-agafe Akhisar site na obodo site na iche 8 km na iche iche na-arụ ọrụ.
Mwepu njem nke Sinan-Batman: E wuchara ihe owuwu dị iche iche nke 7 ma tinye ya n'ọrụ.
Sincan-Yenikent-Kazan Soda Ọdụ Razọ Ọdọ Ọhụụ: Ọrụ nro na-aga n'ihu ma na-eme atụmatụ ịmalite n'ime afọ a.
Diyarbakır-Mazıdağı Owuwu Railway
Ọrụ owuwu a na-aga n'ihu ma na-ezube ịmalite ọrụ n'ime afọ a.
Köseköy-Gebze 3. 4. Nrụpụta ahịrị: 3 na-esote ahịrị dị. na 4. ọrụ na-ewu nke ahịrị na-aga n'ihu.
Ihe owuwu nke Constructionltisak (Njikọ Njikọ)
Iji mee ka ụgbọ mmiri na-ebu ibu, nke nwere ebe dị mkpa na amụma ebumnuche njem nke ala anyị, rụọ ọrụ nke ọma karịa ụzọ ụgbọ oloko, na-agbakwunye akara ndị ọzọ na ụzọ ụgbọ oloko dị ugbu a na ụzọ ụlọ ọrụ dị mkpa. Na mgbakwunye na akụrụngwa ogologo oge 229 358 km na eriri njikọ nke OIZs, ọrụ ọrụ njikọ eriri ogologo 9 19km na-aga n'ihu.
Yht na Mgbakọ na Polatlı-Konya Yht Line…
Turkey si Transportation Infrastructure ka 509 Ijeri Investment Eme
Turkey si Sivas xnumx'ünc Ski Ịme anwansị Center ...
Railway Design Turkey mbụ anụ ụlọ cross ...
Tupras, Turkey mbụ onwe ụgbọ okporo ígwè ọrụ na-eme
Turkey si Trabzon-Erzincan ụgbọ okporo ígwè Strategic ...
Mara n ’ịre ahịa ịre ahịa:
Mara Prozụta: :chekwa YHT na Line Conventional…
Akparịtara Kayseri Railway Projects
ọrụ ụgbọ okporo ígwè
Project Konya-Karaman High Speed ​​Railway
Nusaybin-Habur na-arụ ọrụ ụgbọ okporo ígwè dị elu